မြန်မာ့ သနပ်ခါး - LODGGY
သနပ်ခါးဆိုတာ မြန်မာတွေရဲ့ ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုအနေနဲ့ တည်ရှိနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ မြန်မာတွေ သနပ်ခါးကို မနှစ်သက်သူ မရှိသလောက်ကို ရှားပါးပါတယ်။ မွေးကြိုင်သောရနံ က စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေနိုင်ပြီး အသားအရေ ချောမွေ့စေတဲ့အတွက် လူတိုင်းလူတိုင်း နှစ်သက်ကြတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ အလိမ်းအကျံတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။
သနပ်ခါးကို သမိုင်းအထောက်အထားများအရ ၁၄ ရာစုနှစ်က ရာဇဓိရာဇ် ရေးသားခဲ့ထဲ့ ကဗျာစာပေထဲမှာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အမွေးနံသာဖြင့်ပြည့်စုံပြီး လိမ်းထားလျှင်အေးမြပြီး နေလောင်တာတွေလဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း အစရှိတဲ့ အာနိသင်တွေက အဓိကကောင်းကြိုးအချို့ပါ။
ပုဂံကိုရောက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ လည်လို့ ရမည့်နေရာတွေကတော့ ဘုရား၊ပုထိုးတွေအပြင် ပုဂံမှာရှိတဲ့ ပြတိုက်တွေဟာလဲ သွားရောက်လေ့လာလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေပါ။ ကမ္ဘာတစ်ခုထဲရှိတယ်ဆိုပြီး International Tourist တွေရော၊ ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေကြားမှာပဲ အသိများတဲ့ ညောင်ဦးမြို့ FIT လမ်းနဲ့ သီရိပစ္စရာ (၄) လမ်းထောင့်မှာတည်ရှိတဲ့ ရွှေပြည်နန်း သနပ်ခါးပြတိုက်ကို‌ရော သွားရောက်လေ့လာဖူးကြလား?
ပြတိုက်ထဲမှာဆိုရင် နှစ် ၁၀၀ ကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ သနပ်ခါးပင်များအပြင် သနပ်ခါးအမျိုးအစား အစုံနဲ့ ကျောက်ပြင်များ၊ မြန်မာ့သနပ်ခါး သမိုင်းအပြင် အကြား စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ အကြောင်းတွေလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သနပ်ခါးပင်တွေက အပူပိုင်းဒေသမှာ အဓိကပေါက်ရောက်ပြီး စစ်ကိုင်းဘက်မှ ရွှေဘိုသနပ်ခါး၊ မကွေးဘက်မှာ ရှင်မတောင်သနပ်ခါး စတဲ့ သနပ်ခါးတွေက နာမည်ကြီးဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်လာတဲ့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဘက်မှ တောင်ကြီးမောက်မယ် သနပ်ခါးကလဲ လူကြိုက်များကြပါတယ်။
သနပ်ခါးပင်တွေက အပင်သက်တမ်း ၆-၇ နှစ် မှသာ စတင်ပြီး သနပ်ခါးတုံးအဖြစ် စသုံးနိုင်ပြီး အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ဆိုရင်တော့ အပင်သက်တမ်း 35 နှစ် ကျော်အပင်များက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အချို့အိမ်များတွင်လဲ သနပ်ခါးပင်များကိုယ်တိုက် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပြီး သနပ်ခါးပန်းကိုလဲ ခေါင်းမှာ ပန်ဆင်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ကဲ အကုန်လုံးလဲ သနပ်ခါးကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်၊ သနပ်ခါးထဲမှာ ဘာအမျိုးအစားအကြိုက်ဆုံးဖြစ်မလဲ???